Ogaden News Agency (ONA) – Xilka Ra’isul-Wasaaraha Itoobiya oo Xubno Katirsan Jabhada TPLF Ay Isku Haystaan.
Xilka Ra’isul-Wasaaraha Itoobiya oo Xubno Katirsan Jabhada TPLF Ay Isku Haystaan.
Posted by ONA Admin	/ June 3, 2015
Wargayska luuqada axmaariga kubaxa ee Minilik Salsawi ayaa wuxuu qoray ineey xurguf siyaasadeed kadhex taagantahay jabhada Wayaanaha ee Tigrayan People’s Liberation Front (TPLF). Xurguftan iyo loolankan siyaasadeed ee ka dhex aloosan TPLF dhexdeeda ayaa sabab u ah oo la isku haystaa siduu wargaysku sheegay cidii noqon lahayd ra’isul wasaaraha dalka Itoobiya.
Wargayskan ayaa intaas kudaray ineey xubnahan isku haysta jagada ra’isul-wasaaraha Itoobiya ay rabaan ineey xilka ka qadanaan Hailemariam Desalegn oon kolkii horeba awood badan lahayn maqaar saarna ahaa, wararku waxay intaas ku dareen in H.Desalegn ladoonayo in loo magacaabo xil Safiirnimo ah. Bishii May ee lasoo dhaafay ayaa Hailemariam Desalegn lasaaray waxa afka xabashiga lagu yidhaahdo Gimgamaa (qiimayn) halkaasoo aad loogu bahdilay laguna aflagaadeeyay loona sheegay ineey hogaamintiisu aad uliidato isla markaana ay aad uxuntahay go’aan qaadashadiisu waxaana la’isla gartay in lasiiyo darajada ama heerka B-hoose.
Labada kooxood ee TPLF ay u kala qaybsantay ayaa waxaa kala hogaaminaya ninka layidhaahdo Debretsion Gebremichael ooy waheliyaan madaxa laanta Sirdoonka Itoobiya Getachew Asfa & Generalo katirsan ciidamada militariga Itoobiya. Dhinaca kale ayaa waxaa hogaaminaya ninka layidhaahdo Arkebe Oqubay ooy ku weheliyaan Abay Tsahay , Alaqa Tsagay, General Gabre Kidan oo lafilayo inuu badali doono General Samora Yonis & masu’liyiin caan ah oo ka tirsan ururka TPLF oo dhalinyaro ubadan. Wararku waxay intaas ku dareen inuu Arkebe Oqubay oo aad u dadaalaya qorshayow cad cadna wata isla markanaa abaabul xoogan ka dhex wada ururka TPLF dhexdiisa haddana dadka arrimaha Itoobiya udhuun duleelaa waxay aaminsanyihiinin fursada Arkebe uu haysto eey aad u yartahay sababtoo ah waxaa laga saaray golaha dhexe ee ururka TPLF.
Dhinaca kale waxaa jira in Wasiirka Arrimaha Dibada ee Itoobiya Tedros Adhanom oo loolankan siyaasadeed ee jabhada TPLF hadheeyay dhex dhexaad ka ahaa inuu aaminsanyahay in jagada ra’isul-wasaaraha haddii loo daayo Hailemariam Desalegn ineeysan awooda Jabhada TPLF wax saamayn ah kuyelanaynin. Dhinaca kale waxaa iyaguna doonaya inaan H. Desalegn jagada Ra’isul-wasaarenimada laga qaadin qaar kamid ah wadamada reer galbeedka ah gaar ahaan Maraykanka iyo Ingiriiska. Wararku waxay intaas raaciyeen inuu ururka TPLF ka horjoogsaday ineey ururada Oromada (OPDO) & Axmaarada (ANDM) oo ah labada urur oo iyaguna awood isbidayay isbahaysiga EPRDF-ta dhexdiisa ineey kulmaan isla markaana aysan wax door ah aynan ku yeelanin siyaasada murugsan ee Itoobiya kajirta.
Xaalada Itoobiya kataagan ayaa waxay u egtahay mid aad u murugsan oo mugdi kujirta waxay ku dhamaana aan lasaadaalin karin, wixii warar ah ee ka soo kordha waan idinla wadaagi doonaa inshaa allaah.